Crassula Factory, Suppliers - China Crassula Manufacturers
Miviri, mahybrids e kalanchoe thyrsifolia gadheni, inonziwo drum Ye Tang seal, rudzi rwechirimwa rwakakura, uye davi riri nyore, nguva yakati rebei yekurapa inoshanduka kuita nzombe yekupararira, mashizha akakora, shizha kumucheto kumashure, shizha chimiro checylindrical. kana listric, mberi obtuse, pasina muromo, chando chose chinovhara chando, Rudzi rwakajairika rwemashizha grey girini, asi munzvimbo ine zuva rine musiyano mukuru wekushisa, mashizha anoshanduka akatsvuka semoto, pamwe chete nechimiro senzeve dzegava, saka zita remoto gava.
Zvirimwa zveperennial nyama herbs kana subshrubs, kune madiki uye epakati-saizi mhando.A stolon inokura kubva pasi pe stolon.Madiki rosette emashizha anokura kumucheto we stolon.Saka, jade butterfly brocade yakasimwa kwemakore akawanda inogona kazhinji kukura kuita zvidimbu, asi jade butterfly brocade inokura zvishoma kudarika jade butterfly.Dyara mashizha ane nyama mashizha rosette kuronga, anosiya pfupi spoon. yakaumbwa, yakamira zvishoma, yakatenderedza uye diki yakanongedza, yakakombamira zvishoma mukati, kuitira kuti chirimwa chose chakaita senge funnel, chiedza chegirinhi kana yebhuruu-girinhi ruvara rweshizha pakati, yero jena pamativi ese, mashizha matete zvishoma, mashizha ane slight powdery kana waxy layer, kwete kutya mvura.Jade butterfly brocade cymes axillary, maruva inverted bell - shaped, front - ends cracks 5. Tsvuku, yero kumusoro, inotumbuka kubva munaJune kusvika munaAugust.
1. Zvinodiwa zvezvakatipoteredza
Inofarira nzvimbo dzinodziya, dzakaoma uye dzine zuva.Vanotsungirira kusanaya kwemvura nourombo, kwete kutonhora, asi nemvura.
Ivhu reCrassula Tricolor Jade rinofanira kunge riine porous uye rinopinda mhepo, uye rinofanira kunge riine mvura yakanaka, saka ivhu rekunyura kwezuva rinogona kusanganiswa neshizha mold ivhu kana peat 2 zvikamu, ivhu rebindu 1 chikamu, ivhu rejecha kana vermiculite, kuwedzera kuve nechokwadi. ivhu chikafu, chinogona kuwedzerwa kune chiduku chiduku chekudya kwepfupa.
3. Chiedza chakawanda
Crassula Tricolor Jade inonaka panguva yekukura kubva Kubvumbi kusvika Mbudzi gore rega rega.Munguva yekukura, dzinofanirwa kuchengetedzwa munzvimbo ine chiedza chakakwana.Kana zuva risina kukwana, zviri nyore kukura, izvo zvinoita kuti miti isununguke uye inosiya girini uye yero.
Nheyo yekudiridza yeCrassula Tricolor Jade yakaoma uye yakanyatsodiridzwa, saka mumwaka wekukura wekunyura kwezuva mvura inofanira kukwana, asi inofanirwa kudzivirira mvura yepoto, zvikasadaro iyo Crassula Tricolor Jade iri nyore kuora.
Tembiricha: 18-25 ℃ yakakodzera, haidzike pane 5 ℃ muchando;Kuisa Fetera: Panguva yekukura kwayo, zvakanakisa kuisa fetireza pamazuva gumi ega ega, ine fetireza yemvura;Kuvhenekera: kunoda kuiswa mune zvishoma astigmatic nzvimbo;Kudiridza: kuzadzikiswa zvishoma, kwete kuchera;Shandura hari: Zvakanakisa kushandura hari chitubu chega chega;Kuparira: kunyanya nekucheka, zvakare muchirimo.
Crassula deltoidea chirimwa cherudzi rweCynosaur mumhuri yeCrasaceae, yakagovaniswa muNamibia. Miti yakaderera, kazhinji isingadariki masendimita gumi kureba, madzinde akamira kana kuti oblique, dzimwe nguva anoita branching; Mashizha akatarisana, ovate, triangular kana rhomboid, ane nyama, machena muchitarisiko, akapararira nediki concave makwapa, pink muchiedza chakakwana;Cymes, diki urn yakaumbwa, mukaka chena, inonhuhwirira, inotumbuka muna Nyamavhuvhu naGunyana gore rega rega.Kazhinji inoshandisa shizha kuparadzira kurimwa, bonde rinofarira zuva, rinofefeterwa zvakanaka. , nzvimbo yakaoma uye ivhu rejecha rine mvura yakanaka, muti wacho unowedzera kusanaya kwemvura, kunwisa kwakanyanyisa kuchaora mudzi.
Crassula Ausensis Ssp.titanopsis is a perennial herbaceous flowering plant of the genus Cynosaur mumhuri yeCrasaceae, inozvarwa kumaodzanyemba kweNamibia.Plant kureba kusvika masendimita gumi, iri nyore kukura;Mashizha erosette, gobvu nyama, ovate, spatulate, madiki madiki madiki makwapa uye chena bvudzi pfupi. , mashizha akasvibira, akapararira dzvuku kana shava makwapa matsvuku uye zvigamba mushure mezuva, maruva machena, corolla shanu-lobed, mberi lobes evagite, achitumbuka muzhizha uye matsutso; Inogona kushandisa mbeu uye bazi divi bud propagation, chirimo uye matsutso kwemwaka wekukura, sechiedza chakakwana.
Mamiriro ezvinhu ayo Crassula oblique Gollum anofarira kudziya uye kuoma, kupenya kwezuva kwakakwana, kunopesana nekusanaya kwemvura uye hafu yemumvuri, kwete kuoma, kudzivirira kupisa kwakanyanya, saka Crassula oblique Gollume inosimudza sei? Mukurima kwemukati, inofanira kuiswa munzvimbo yakanaka. chiedza, nguva nenguva kuti uende kunze kwezuva, uye munguva yechando kuita basa rakanaka rezviyero zvinodziya.Kana iri ivhu rekurima, zvakanakisisa kusarudza kusununguka, kufema, mvura yakanaka yevhu rakajeka acidic.